ယွန်း: (၁၉) ဇူလိုင်
(၆၃)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ 
ကျဆုံးလေပြီးသော လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း နှင့်တကွ အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်များအား
ဤနေရာမှ ရိုသေလေးမြတ်စွာ ဂါရ၀ပြုအပ်ပါသည် ။
(ဇူလိုင် ၁၉ . ၂၀၁၀)
ပုံကိုဤနေရာမှ ယူပါသည် ။
စာရေးသူ ယွန်း မှ 1:10 AM
အမျိုးအစား ခံစားချက်, အမိမြေ၏ နေ့ ကြီးရက်ကြီးများ
ခေတ်အဆက်ဆက် မှ အာဇာနည်များ အားအလေးပြုလျှက်
ဘယ်လိုမှ မမေ့နိုင်ဘူးဗျာ.... ဒီနေ့ဆိုတဲ့သမိုင်းဖြစ်ခဲ့လို့ ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာ ဒီလိုနေရတာပေါ့.....
အလေးပြုသင့်သူတွေမို့ လာရောက်ပြီး အတူတူ အလေးပြုသွားပါသည်။
အဲဒီယမ်းငွေ့တွေ ... မိုက်ရိုင်းလိုက်တဲ့ယမ်းငွေ့တွေ ... ကိုယ့်အမျိုးသားချင်း ပြန်သတ်တဲ့ ယမ်းငွေ့တွေ .. ဘယ်တော့များမှ စဲ နိုင်မှာတဲ့လဲ ??????
ကျနော်လည်း အလေးပြုသွားပါတယ်နော် :)